Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.2 Ịjụ vs. edebe
Nyere na ihe na ọzọ nke anyị omume bụ kpọọ na ọchịchị na-azụ ahịa administrative data, ụfọdụ ndị nwere ike iche na ịjụ ajụjụ bụ a ihe gara aga. Ma, ya bụghị na mfe. Ọ bụ nnọọ eziokwu na-eme nnyocha ga-ajụ erughị banyere omume n'ọdịnihu, ma, dị ka m na-atụle n'Isi nke 2, e nwere ezigbo nsogbu na ziri ezi, Oke, na accessibility Ọtụtụ nnukwu data isi mmalite. Ya mere, m na-atụ anya na nsogbu na ndị a data isi mmalite pụtara na-eme nnyocha ga na-ajụ ajụjụ banyere ha omume na-abịanụ.
Tụkwasị na nke a bara uru mere, e nwekwara a ọzọ isi ihe na-ajụ, sị: omume data-ọbụna zuru okè omume data-ókè. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mkpa na-elekọta mmadụ a ga esi na predictors bụ esịtidem na-ekwu, dị ka mmetụta uche, ihe ọmụma, na-atụ anya, na echiche. Esịtidem na-ekwu adị naanị n'ime ndị isi, na mgbe ụfọdụ ndị kasị mma isi mụta banyere esịtidem na-ekwu bụ ịjụ.
The bara uru na isi adịghị ike nke nnukwu data isi mmalite, na otú ha pụrụ imeri na nnyocha ndị e mere, na-egosi na Moira Burke na Robert Kraut si (2014) nnyocha na otú ike nke enyi na-impacted site na mmekọrịta on Facebook. N'oge ahụ, Burke na-arụ ọrụ na Facebook otú o nwere zuru ohere otu n'ime ndị kasị oke na zuru ezu ihe ndekọ nke àgwà ụmụ mmadụ mgbe kere. Ma, ọbụna ka, Burke na Kraut nwere iji nnyocha ndị e mere iji za ha research ajụjụ. Ha pụta mmasị-esi mechie respondent na-adị kpọmkwem enyi-bụ esịtidem ala na ọ bụ nanị dị n'ime respondent isi. Ọzọkwa, na mgbakwunye na-eji a nnyocha e mere na-anakọta ha pụta mmasị, Burke na Kraut nwekwara ike iji a nnyocha e mere na-amụ banyere ihe ndị ọzọ nwere na-etinye ihe. Karịsịa, ha chọrọ ikewapụ mmetụta nke ekwurịta okwu on Facebook si nkwurịta okwu site ọzọ ọwa (eg, email, ekwentị, ihu na ihu). Ọ bụ ezie na interactions site email na ekwentị na-akpaghị aka na-dere, ndị a metụtara na-adịghị n'oge Burke na Kraut. Na ijikọta ha nnyocha data banyere ọbụbụenyi ike ma na-abụghị Facebook na mmekọrịta ya na Facebook log data, Burke na Kraut kwubiri na nkwurịta okwu via Facebook mere n'ezie ụzọ na ụba mmetụta nke ịnọkwu.
Dị ka nke Burke na Kraut egosi, nnukwu data isi mmalite agaghị egbu mkpa ajụ ndị mmadụ ajụjụ. N'ezie, m ga-adọrọ ndị na-abụghị ihe na nke a ọmụmụ: nnukwu data n'ezie ka uru nke ịjụ ajụjụ, dị ka m ga-egosi n'oge a isi. Ya mere, ụzọ kasị mma na-eche echiche banyere mmekọrịta dị n'etiti na-arịọ na-edebe ihe bu na ha bu complements kama nọ n'ọnọdụ; na ha dị ka ahuekere butter na jelii. Mgbe e nwere ihe ọzọ ahuekere butter, ndị mmadụ chọrọ ihe jelii; mgbe e nwere ihe ọzọ nnukwu data, ndị mmadụ chọrọ ihe nnyocha ndị e mere.